Alahady 22 Mey 2022 – FJKM
Ny fikasan’Andriamanitra ho an’ny fiangonany
1-Manaiky hotarihan’ny Fanahy Masina
« Ary hataoko ao anatinareo ny Fanahiko » (and14). Miasa , manome ny Fanahiny ho an’ny olony eto Andriamanitra .Io Fanahin’Andriamanitra io no manavaka , mampiavaka ny olona efa nofidiny noho ny firenena hafa .Fitiavana manokana izany , fa na dia teo aza ny toetran’ny olona niodina taminy dia tsy foiny .Nomen’Andriamanitra ny Fanahy Masina isika ary tena fitiavany izany .Mampiseho izany fa miavaka amin’ny olona hafa isika .
« ...dia ho velona ianareo... » (and14) ilay vahoakan’Israely niaina tany amin’ny tany fahababoana , efa tsy nanana ny maha-izy azy intsony no indro ambara fa ho velona.Ny fanomezana aina ireo taola-maina izay nifanantonantona , naniry hozatra sy nofo, nasiana fofonaina ary tonga nanana fahavelomana .Raha manaiky hitoeran’ny Fanahy Masina sy tarihan’izany eo amin’ny fiainana izay vaovao ao amin’i Jesoa Kristy .
« hamponeniko any amin’ny taninareo ianareo ... » (and14).Honina sy hitoetra indray ao amin’ny tany fampanantenana ny olona . Ny fiparitahan’ireo taola-maina tao an-dohasaha dia endriky ny fisarahana .Rehefa niasan’ny Fanahin’Andriamanitra kosa anefa dia tonga fiombonana, rava ilay fisarahana. Rehefa manaiky hotarihan’ny Fanahy Masina ny olona dia miaina tontolo vaovao misy fiombonana, fifankatiavana, fihavanana.
Lazao ireo toetra tokony hampiavaka ny mpino kristiana .
Alarobia 06 Jolay 2022
Talata 05 Jolay 2022
Sabotsy 02 Jolay 2022
Zoma 01 Jolay 2022
Alakamisy 30 Jona 2022
Alarobia 29 Jona 2022
Talata 28 Jona 2022
Sabotsy 25 Jona 2022